Jeremiya 20 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
20 Manje uPhashuri indodana ka-Imeri,+ umpristi, futhi owayengumphathi oholayo endlini kaJehova,+ waqhubeka emlalele uJeremiya ngesikhathi eprofetha la mazwi. 2 Khona-ke uPhashuri wamshaya uJeremiya umprofethi+ wamfaka esitokisini+ esasiseSangweni Elingenhla LikaBhenjamini, elalisendlini kaJehova. 3 Kodwa kwathi ngosuku olulandelayo uPhashuri wamkhipha uJeremiya esitokisini,+ uJeremiya wayesethi kuye: “UJehova ubizé igama lakho+ ngokuthi ukweThuka nxazonke,+ hhayi ngokuthi uPhashuri. 4 Ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka ngikwenza ube ngukwethuka kuwe ngokwakho nakubo bonke abakuthandayo, ngokuqinisekile bayowa ngenkemba yezitha zabo+ amehlo akho ebukele;+ wonke uJuda ngiyomnikela esandleni senkosi yaseBhabhiloni, futhi impela iyomyisa ekudingisweni eBhabhiloni, imbulale ngenkemba.+ 5 Futhi ngiyonikela zonke izinto ezibekelelwe zalo muzi nawo wonke umkhiqizo wawo nazo zonke izinto zawo eziyigugu; futhi yonke ingcebo yamakhosi akwaJuda ngiyoyinikela esandleni sezitha zawo.+ Ngokuqinisekile ziyoyiphanga ziyithathe ziyiyise eBhabhiloni.+ 6 Kepha wena, Phashuri, nabo bonke abahlala endlini yakho, niyoya ekuthunjweni;+ uyofika eBhabhiloni ufele khona futhi uyongcwatshwa khona wena nabo bonke abakuthandayo,+ ngoba uprofethé kubo ngamanga.’”+ 7 O Jehova, ungikhohlisile, ngakhohliseka. Usebenzise amandla akho ngokumelene nami, wanqoba.+ Ngibe yinto yokuhlekwa usuku lonke; wonke umuntu ungihleka usulu.+ 8 Ngoba njalo uma ngikhuluma, ngiyakhamuluka. Ngubudlova nokuphanga engikumemezelayo.+ Ngoba izwi likaJehova libé kimi yimbangela yokuhlanjalazwa neyokuklolodelwa usuku lonke.+ 9 Ngathi: “Ngeke ngisakhuluma ngaye, futhi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe.”+ Enhliziyweni yami kwaba njengomlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni ami; futhi ngakhathala ukuzibamba, ngangingakwazi ukukukhuthazelela.+ 10 Ngoba ngezwa umbiko omubi ngabaningi.+ Kwaba khona ukwethuka nxazonke. “Memezelani, ukuze simemezele ngaye.”+ Wonke umuntu ofayo othi kimi “Ukuthula!”—balinde ukuqhuga kwami bethi:+ “Mhlawumbe uyokhohliseka,+ bese simnqoba futhi siziphindiselele kuye.” 11 Kodwa uJehova wayenami+ njengonamandla owesabekayo.+ Yingakho labo abangishushisayo uqobo lwabo beyokhubeka banganqobi.+ Ngokuqinisekile bayohlazeka kakhulu, ngoba bayobe bengachumile. Ukululazeka kwabo okumi kuze kube nini nanini kuyoba okungayikulibaleka nanini.+ 12 Kodwa wena, Jehova wamabutho, uhlola olungileyo;+ ubona izinso nenhliziyo.+ Kwangathi ngingabona impindiselo yakho phezu kwabo,+ ngoba ngilembule kuwe icala lami engimangalelwe ngalo.+ 13 Hlabelelelani uJehova, nina bantu! Dumisani uJehova! Ngoba ukhululé umphefumulo wompofu esandleni sabenzi bokubi.+ 14 Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo! Kwangathi usuku umama angibeletha ngalo lungebe olubusisiwe!+ 15 Makaqalekiswe umuntu owaletha izindaba ezinhle kubaba, wathi: “Uzalelwe indodana, owesilisa!” Ngokuqinisekile wamenza wajabula.+ 16 Yena kanye lowo muntu kumelwe abe njengemizi uJehova ayigumbuqele ebe engazange adabuke.+ Kumelwe ezwe ukukhala ekuseni nenhlabamkhosi emini.+ 17 Akangibulalanga ngani nokungibulala kwasesibelethweni, ukuze umama abe yingcwaba lami futhi isibeletho sakhe sihlale sikhulelwe kuze kube nini nanini?+ 18 Kungani ngiphumile esibelethweni+ ukuze ngibone umsebenzi onzima nosizi+ nokuba izinsuku zami ziphele ngehlazo lodwa?+